Abesifazane bakulungele lukhulu balondoloze ubuhle babo futhi elikhangayo. Ngezinye izikhathi kumelwe benze ukuya ngaphansi ummese udokotela ohlinzayo, futhi bachitha imali eningi on ebizayo beauty zokwelapha. Nokho, akubona bonke umzamo ngemuva kokuthi owesifazane uyaneliswa yalokho, ikakhulukazi uma kuziwa imibimbi. Abakwazi avele ngisho esemncane kakhulu, uma nentfombatane behluke ngani? Emotionality ngokweqile futhi ngokuvamile obuhlinayo. Ngaphambili, eziningi ucansi fair abonile kuphela indlela ukubabulala wazonda imibimbi - imijovo Botox Nokho, okuyinto, angabangela nemiphumela engalindelekile. Kodwa muva nje, emakethe Russian has umkhiqizo omusha ngokuphelele elikuvumela ukunciphisa izinguquko ezihlobene nokukhula ebusweni - isichibi imibimbi. Leli thuluzi kuye kwabangela imibuzo eminingi kusukela amakhasimende, ngakho sanquma ukunikezela lesi sihloko.
Imibimbi Izimbangela Ezemfundo
Singakezwa ukuthi ukuphumelela imibimbi patch, kudingeka uqonde ukuthi lokhu kuvela omubi abesifazane imibimbi ebusweni. Imibimbi zibangelwa ukusikwa imisipha ukuthi anamekwe kogebhezi isikhumba. Wonke umuntu esilinganayo imisipha ngawo ukuveza imizwa yabo. Nokho, abanye abantu ngokomzwelo ngaphezulu bese njalo ukunwebeka kwemisipha, imisipha yobuso kakhudlwana. Kodwa kwezinye kunzima ukufunda lutho phezu isimo sobuso - they are ncishana kakhulu elithi omkhulu wokudlulisa imizwelo. Ngakho-ke, abanye abantu imibimbi akhiwa ekuseni futhi ngokushesha kakhulu babe yibo lucky ezijulile futhi eziyivelakancane ukuguga ngiziqhayise cishe bushelelezi isikhumba ibala.
Plasters, ukuqeda imibimbi: incazelo emfushane
Khonka imibimbi kakade ijwayelekile abesifazane abaningi. Phesheya, wathengisa eminyakeni engaba yikhulu, kodwa uvele Russia muva. Ikhasimende wokuqala waqala ngokuthi abesifazane bakhona abake esetshenziswa ithuluzi. Babebonisa abangane bakhe nabantu ayebajwayele, ngenxa isichibi emhlabeni anti-umbimbi, uquqaba lwezingelosi amahemuhemu, izimpawu ke njengoba panacea lokuguga.
Empeleni olukhonkiwe - material afuthwe ngesibulali izinto ezihlukahlukene esebenzayo, okuyinto okwamanje kuveza abakhiqizi eziningana futhi zokuzamazama ezahlukene (isib, usimende imibimbi phakathi amashiya).
Njengoba imibimbi akhiwa ngaphansi kwethonya imisipha yobuso kakhudlwana ukudikiza, izenzo patch njengoba strip emvula eziphumulele kubo. Izinhlobo eziningi zama-umkhiqizo okwengeziwe uqinisa izinto ezihlukahlukene ukuthi kwamaphutha nakakhulu umphumela.
nomkhiqizi ngamunye enikeziwe imiyalelo, ecacisa isikhathi inqubo. Kodwa ngokwesilinganiso, isichibi kumelwe libe imibimbi isikhumba amahora okungenani ezintathu. Abesifazane abaningi ushiye kuwo ubusuku, osho ukuthi kuleli cala, ukusebenza yayo iba kubonakale kakhulu. Ngemva inkambo ukwelashwa imibimbi emihle zinyamalale ngokuphelele, futhi imibimbi ezijulile ziphelelwa ebonakalayo. Nokho, ukubuyekeza lokhu kusho sizobuyela zingxenye ezilandelayo kwalesi sihloko.
Uma kuqala uthenge sikhungo kule ekhemisi ke khumbula ukuthi ingasetshenziswa kuphela indawo ngawo kuhloswe. Kuze kube manje, ukukhululwa:
Olukhonkiwe imibimbi ngaphansi kwamehlo. Ivame ogibele amakhona amehlo, ukuze ngingasebenzisi yokwelula isikhumba obucayi ngeke kuyilimaze ke.
Esebenzisa emphethweni Nasolabial.
Cover imibimbi ovundlile emabunzini.
Okukushoyo ukususa imibimbi phakathi amashiya.
abakhiqizi abaningi avumele ukusetshenziswa ngamunye ukuhlubula kathathu.
Uma izibuyekezo eziningi imibimbi patch wenza umbono ofanele kuwe futhi banquma ukuthenga leli thuluzi, qiniseka ukuhlola uhlu lwezinkinga, ikhambi ngalo zizosebenza. Siyajabula niyakuthuma izwi zonke izinto:
imibimbi ezicashile ebusweni;
creases ezijulile ngeminyaka ubuso bakho;
yokuntuleka umswakama nebala abampofu.
Yiqiniso, ukuthi we-patch, kanye nanoma yimuphi omunye umkhiqizo yezimonyo, kukhona eziningi Izimo, lapho-ke noma kunjalo akumelwe lisetshenziswe:
izifo ezithathelwanayo kwesikhumba;
ezingamahlalakhona esehlaselwa isifo sesikhumba esenyanyekayo esigabeni acute;
induna kanye ukuqubuka iguliswa;
izilonda nokuncishiswa esikhumbeni;
isikhathi emumva izinqubo yezimonyo;
ke akudingekile ukusebenzisa patch kubantu ngaphansi eneminyaka engamashumi amabili nanhlanu.
Ngaphezu kwalokho, akufanele ukusebenzisa lo mkhiqizo uma ukhulelwe noma ukuncelisa ingane.
Uma ucabanga ngalokho isichibi imibimbi iyona engcono kwaphumelela kakhulu, kufanele uhlole ukuthi yini ngokucophelela indlela yokwahlukanisa. Ukugxila kulesi sici futhi izindleko iphakethe ngalinye, ungaba umqondo abanye mayelana nomkhiqizo. Olukhonkiwe imibimbi emabunzini emakethe Russian has izinhlobo eziningana, it is zihlukaniswa ngokuyinhloko umenzi:
abavamile patch Russian.
Ukuze ngamunye zilwane, sizokutshela ngokuningiliziwe.
Amapeshi Flownies: ekudalweni
Njengezinye izinto eziningi ezafika nomuntu abakhaliphile usimende Flownies kwavela ngengozi. It yasungulwa ngumuntu wesifazane - Margaret Krossen - sekudlule cishe ikhulu leminyaka edlule. Iqiniso lokuthi Margaret akakuthandanga indodakazi yakhe, is efanele wahlanganyela ukudlala upiyano, njalo obuswacile, ezama ukugxila nokusebenza kwayo. Waqala cabanga ngendlela ukuze akhulule intombazane kusukela imibimbi ngaphambi kwesikhathi ukuthi bacekele ubuso bakhe kuhle. Ngesinye isikhathi esededelwe, watholela umbono ukunamathisela tape ebunzini ukuvumela imisipha ukuba uphumule. Yavela kanjalo-ke isichibi ebunzini imibimbi.
Izibuyekezo lokhu imoto kweso landizela emhlabeni Hollywood noMargaret akanikelanga udumo nje kuphela kodwa futhi imali enhle. Ngokuhamba kwesikhathi, kwaba umnikazi inkampani enkulu ukuthi namanje ukhiqiza lo mkhiqizo.
Incazelo kanye nesicelo Flownies
Ngo sisikhulu emakethe uyawuthanda isichibi imibimbi emabunzini Flownies inkampani. Ngokuvamile kulapha lapho abesifazane sebeqala bajwayelane ithuluzi. Ngakho sanquma futhi nencazelo yegama lakhe.
Isichibi wenziwe kraft iphepha, edayiswa amaphakethe of izingcezu eziningana, okuyinto zitholakala strip owodwa ngobude. Ngaphambi ukusetshenziswa, kudingeka uhlukanise inombolo oyifunayo izicucu. Ukuze umphumela lalibalulekile ngaphezulu, isikhumba ebusweni is bahlanza yinoma yimuphi umkhiqizo yezimonyo futhi sisetshenziswa amafutha okuthambisa thinly evamile. Beauticians belulekwa ukuba baphathe massage ukukhanya ebusweni ukuze nokujikeleza kwegazi futhi kubangele more ukumuncwa ngokushesha ukhilimu.
Phela zokukhwabanisa kwenziwa kancane moisten patch ngamanzi futhi unamathele kuso esikhumbeni zenzeka. Ukuze nenkanuko edlulele kangcono cindezela anamatheliswe nocezu swab ukotini noma umunwe.
Effect kanye nokubuyekezwa of usimende Flownies
Umenzi uncoma ukusebenzisa isichibi amahora okungenani abantu abathathu, kungcono nilishiye libe ebusuku. Phambi imibimbi ezijulile ebusweni, sewunganamathisela izingcezu ezimbalwa imali ezindaweni eziseduze kwesikhumba. Isichibi kumele kusetshenziswe nsuku ngokuhamba ngenyanga. Ukuze zokuvimbela kwanele ukuba izikhathi ezimbili noma ezintathu ngesonto.
Yini umphumela kungalindeleka kusukela kule izindlela ezingavamile? Abesifazane abasebenzisa ke zithi aqede ngokuphelele imibimbi kuphela ebonakala Yiqiniso eyodwa. Ziba obunganakekile, bese iyanyamalala ngokuphelele. Kodwa cishe ukuqeda imibimbi ezijulile unaphakade kuwe, nakuba mancane evelele. Ikakhulukazi, lo mphumela ephawuleka ekuseni ngemva kokususwa patch. abesifazane abaningi bathi, ngifuna esibukweni futhi ngaba nomuzwa wokuthi abasebasha iminyaka eyishumi. Okungukuthi, lo mphumela afuna ukukufeza.
Khumbula ukuthi nezimagqabhagqabha Flownies angathengwa Pharmacy lomuzi wakho, noma ngokusebenzisa amasayithi ekhethekile. Izindleko isilinganiso iphakheji ku ekupha ama-ruble ayizigidi eziyikhulu namashumi amabili.
Lo mkhiqizo has a ezahlukene kakhulu, futhi wenza inkampani owaziwa yezimonyo Japanese. Ngokwesibonelo, cabanga, isichibi glabellar imibimbi Phiten.
Kuyathakazelisa ukuthi i-product afuthwe ngesibulali ekhuthaza ekhethekile - akvametallom. Lesi sakamuva ekhuthaza amanzi molecule nensimbi (isiliva, igolide, titanium nokunye okunjalo). Ngenxa yalo mkhiqizo akanalo nje efile, kodwa futhi umphumela yezimonyo.
Iphakheji liqukethe izingcezu evamile ayibhade imibimbi phakathi amashiya ngebhola metal phakathi. Anakho umphumela ngisho enkulu zokwelapha, njengoba kuqinisekiswa izimpendulo zabesifazane ukusebenzisa leli thuluzi.
Izindleko iphakethe ngalinye, okuyinto izingcezu angamashumi ayisikhombisa ezahlukene usayizi amabanga komunye kanye ruble ayizigidi nengxenye.
Uma ungenalo izimali eyanele ukuthenga esigodweni sokuhlunguphazwa esinjalo imibimbi, sebenzisa ezivamile ekhemisi usimende. Wabonisa ukuba kuyithuluzi eliphumelela kakhulu futhi engabizi namanje esetshenziswa ogogo bethu.
Nokho, kufanele balandele imithetho ukusetshenziswa patch, ngenzela nje ukuthi uma uthola elamukelekile:
isikhumba ngaphambi kokufaka izindlela ezidingekayo ukuze gcoba ke no ayisikhilimu noma anti-umbimbi serum, ekahle kuyinto ukwengeza leaf juice fresh enhlaba;
ngemva massage ukukhanya ngeminwe ngokuqinile kungenziwa sizoshwabana futhi ukukulungisa nge ucezu usimende;
ungashiyi pad amahora angaphezu kuka ayisishiyagalombili (isikhumba akusho ukuphefumula ngaphansi kwaso);
ukususa patch kumele ngokucophelela pre-wetted ngamanzi;
abesifazane abaningi esikhumbeni uhlala nokuncane ungqimba ingcina, ngokuvamile sihamba ngaphakathi kwamahora ambalwa.
Ungakhohlwa ukuthi isichibi njalo akufanele isetshenziswe izikhathi ezingaphezu kwesisodwa ngenyanga. Uma kungenjalo, ungase ukucasulwa ubala futhi ukusabela ezibangelwa ukuntuleka komoya-mpilo.
Uphenyo ukuphumelela patch
Okuchaza manje okuvame kakhulu ekulweni imibimbi? Iningi labesifazane bayaqaphela ukuthi lena - a ephakamisa kuhlinzwa Botox. Nokho, muva nje, futhi yena nabanye inketho ehlisa ngenxa eminingi emibi futhi imisebenzi akuphumelelanga. Ngakho-ke, lo wesifazane waqala ukuba ufune esikhundleni ukuhlinzwa. Kwabe sekuvela ukuthi nezimagqabhagqabha abaningi azisuswanga sina nhlobo, ngokuqinisekile uwine umthengi Russian. Ngemva kokuhlaziya Izibuyekezo eminingi mayelana nomkhiqizo, kungaba ngokubhuduzela ngokuthi isungule kakade ngokwaso njengoba ithuluzi nehlukile futhi ngempumelelo ekulweni isikhumba ukuguga.
Izinzuzo baseRussia zihlanganisa izimfanelo elandelayo:
amanani aphansi uma kuqhathaniswa Botox imijovo noma kokuqina kuhlinzwa;
umphumela ephawuleka emva kokusetshenziswa kokuqala;
lapho omunye emaphaketheni esebenza ungahle wanele izinyanga eziyisithupha;
ngesikhathi efaka isicelo eside ye-ejenti kungaba bahlukane nakho njalo okungalindelekile imisipha ukungezwani okwenzeka nge abesifazane abaningi;
plasters esakhiwe ngezinto zemvelo.
Abanye besifazane bathi futhi yokuntula ukusetshenziswa nezimagqabhagqabha:
Kusho hhayi njalo ihlinzeka yi esitebeleni;
abesifazane abaningi bayazi ukuthi isichibi iza unstuck ngokushesha;
uma ushiya indawo ebusuku, ke ukulala kuyoba nzima ngempela naye;
akuzona zonke owesifazane Russian isilinganiso ukulungele ukuchitha imali ebekiwe umkhiqizo ukuthi kungase kungabi njengoba nomphumela njengoba singathanda.
Ngokusekelwe kulokhu okungenhla, omunye wesifazane, ungase ube nombono ukuthi zinjalo yini ithuluzi kuwufanele olutholayo. Mhlawumbe kungaba ngokuqondile umkhiqizo isimangaliso oyowushintsha wena ngokoqobo ukusula iminyaka eyishumi noma nanhlanu ebusweni bakho.
Indlela ngokushesha ukuze libe nsundu elangeni ngaphandle umonakalo empilweni?
Indlela ukususa tindilinga amnyama ngaphansi kwamehlo akho?
Australia: yezimila nezilwane ezihlukahlukene. izici zemvelo-Australia. flora eziyingozi nezilwane ezihlukahlukene Australia